Iqukethe izinto ezininzi, ezinje ngetyhubhu enemisonto, iphepha lobusi, ibheki, njl. Inkqubo yayo inzima kakhulu, ke imveliso yethu incinci, kodwa ihlala inqabile.
I-30cm yokuphinda isetyenziselwe ukuphinda isebenze nge-tube enomsonto kunye neqatha lobusi
Imibhobho yeglasi yamanzi iiHookahs iiRigs zeRabha zeRAB zokuphinda zisetyenziswe kwakhona
• Ukuphakama 23cm
Itekhnoloji ye-Klein Recyler igcina amanzi kunye nomsi uhlala uqukuqela njengoko iqala ukubetha isigubhu se-drum, i-Faberge iqanda le-percolator, kwaye ekugqibeleni i-mini tornado percolator yokuqokelela umsi wakho kunye nokubonelela ngomda wokuqhekeza amava okutshaya!
Umbhobho waManzi weglasi uShisha Hookah Iglasi yokutshaya iPayipi yokuTshaya izixhobo zeGlasi iBeaker Pipe
I-Beaker bongs ibikumgangatho okoko i-bongs ikhona. Inokukhanya ebumnyameni kwaye ilungele ukusetyenziswa kumaqela.
• Ukuphakama 25cm
• Iglasi ye-5mm
• Kuza isitya se-19mm kunye nokusasazeka komhlaba
Isitayile esitsha sokuTshaya isikhonkwane esingamakishiyo isiXhobo seQuartz Izixhobo zokuTshaya 10mm / 14mm / 18mm / 20mm Banger
Ujongano olungabonakaliyo, ukuhamba komoya kuhamba kakuhle.
-Izinto zeBanger: Quartz yokwenyani
-Banger Wall Wall: 2mm
-I-Banger OD: 20mm
-Udidi oluHlanganisiweyo lweBanger: Indoda
Ubungakanani obuhlangeneyo beBanger: 10mm, 14mm
Ukutshaya isikhonkwane esingamakishiyo ujongano Izixhobo zokutshaya ze-10mm14mm18mm20mm Quartz Banger